Indlu yeeNdwendwe zaseHilltop ngaselwandle - I-Airbnb
Indlu yeeNdwendwe zaseHilltop ngaselwandle
Ekhaya kude nekhaya. Kufuphi nolwandle lwaseGore Bay kunye nomlambo iHurunui. Iivenkile ezikufutshane ziikhilomitha ezili-12 ukusuka eCheviot. Ukuba uthanda ukuvuka kunye nokuphuma kwelanga kunye nokuthatha uhambo oluya elunxwemeni okanye ubambe ibhodi yakho ye-surf ukuze ubambe amaza alahlekileyo wonke umntu ngenxa yokuba belele okanye beloba emilanjeni kunye ne-surf ephosa kakuhle i-Hilltop Guest House unayo ibhalwe yonke into..
Kukho umbono wolwandle ukusuka kwindlu yeendwendwe . Uya kujikelezwa yimithi kunye nobomi beentaka.
Sihamba ngemizuzu emi-5 ukuya kulwandle oluhle lwaseGore Bay. 1 umzuzu ukuhamba ukuya ekuphefumleni uthatha iCathedrals Lookout.
Siyafumaneka kwimibuzo malunga nommandla . Sobabini singabantu abaxakeke kakhulu ngoko ke asizu kuthatha ixesha lakho ngokungeyomfuneko. Uya kumfumana uJohn ubukhulu becala kwisitiya semifuno kwaye ndihambahamba ndisenza imisebenzi yasekhaya imini yonke ..
Siyafumaneka kwimibuzo malunga nommandla . Sobabini singabantu abaxakeke kakhulu ngoko ke asizu kuthatha ixesha lakho ngokungeyomfuneko. Uya kumfumana uJohn ubukhulu becala kwisiti…